जनक शिक्षाले बिक्रि गर्यो एक करोड ३० लाख थान पुस्तक, कर्णालीमा कहिले पुग्ने ? – Mission Khabar
जनक शिक्षाले बिक्रि गर्यो एक करोड ३० लाख थान पुस्तक, कर्णालीमा कहिले पुग्ने ?
अधिकांश पुस्तकमा पुरानै नक्सा, नयाँ नक्साको बेग्लै पुष्ठ
मिसन खबर २१ असार २०७८, सोमबार ०८:२२
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि उत्पादित पाठ्यपुस्तकमध्ये अहिलेसम्म ७० प्रतिशत बिक्री÷वितरण गरेको छ । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका बीच पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएपछि पाठ्यपुस्तक बिक्रेतामार्फत ढुवानी भएर विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा पुगेका हुन् ।
विगतका तय गरिएका पाठ्यक्रम मुद्रणीय प्रति (सीआरसी) का आधारमा पहिल्यै छापिएका पाठ्यपुस्तकमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश भएको छैन । नक्साबारेको सम्बन्धित पृष्ठ अलग्गै छापेर विद्यालय–विद्यालयमा पठाउने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले अहिले मुद्रण भइरहेका पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सासहित छपाइ भइरहेको र पहिले छापिएकाहरुको हकमा नक्सा अंकित पृष्ठ नयाँ छापेर पठाइएको जानकारी दिनुभयो । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व हो । कक्षा एकदेखि तीनसम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रका प्रेसले उत्पादन गर्दै आएका छन् भने माथिल्लो कक्षाका लागि जनक शिक्षाले उत्पादन गर्दै आएको छ । वितरणका लागि केन्द्रले देशका आफ्ना प्रादेशिक र अन्य कार्यालयमा गरी एक हजार एक सय बिक्रेता नियुक्त गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमा नयाँ नक्साबारे पाठ्यसामग्रीमा परिमार्जनका लागि औपचारिक पत्राचार नगर्दा पुरानै नक्सा राखेर बजारमा पाठ्यपुस्तकमा पठाइएपनि गुनासो आएको थियो । यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ नक्सा समावेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । असार १५ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षा लिमिटेडलाई त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आग्रह नगरेसम्म उत्पादनकर्ता निकायले पाठ्यपुस्तकमा परिमार्जन गर्न पाउँदैन । नयाँ (चुच्चे) नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल बढेर एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ कायम भएको छ । संसदबाट संविधान संशोधन भएपछि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही असार १३ गते ‘पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ निकाल्दै विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीका सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिको गएको जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार यस शैक्षिक सत्रका लागि बिक्रीमा रहेका स्वीकृत पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा समावेश हुनुपर्ने सूचना बिक्रेता, शिक्षक र अभिभावकमा गराएको छ ।
अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा अहिले पनि पुरानै नक्सा भएका धेरै पुस्तक देखिएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ । कक्षा एक, दुई, तीन र ६ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू भएकाले यी पुस्तकमा भने स्वतः नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छ । लिमिटेडका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले दिएको एक करोड ८४ लाख थान पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा अहिलेसम्म एक करोड ३० लाख थान बिक्री वितरण भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाबाट पाठ्यपुस्तक अभावको गुनासो आएको छैन ।